Ukubuka ulwandle kwigumbi eline-aircon neBalcony. - I-Airbnb
Ukubuka ulwandle kwigumbi eline-aircon neBalcony.
Igumbi lakho lokulala e i-resort sinombuki zindwendwe onguSuraida
Ngaba ukhe waphupha ngokulala kwisandi sokucamngca samaza? Ukuvuka kwimitha yegolide yokuphuma kwelanga? ILanta Sabai Day House yindawo eLwandle iya kukunika la mava awodwa. Sijoyine kwaye uphile ubomi bokwenyani basekhaya kwesi siqithi sihle.
ILanta Sabaiday House ikwiDolophu eNdala, eKo Lanta, inamagumbi anamhlanje anombono wolwandle. Ine-air conditioning kwaye inegumbi lokuhlambela labucala. Kwaye likhaya lokwenene kude nekhaya. Indlu encinci yeendwendwe eyakhiwe phezu kwezinti elwandle kwidolophu endala ezolileyo yaseKo Lanta. Indawo ihonjiswe kusetyenziswa umthi njengebhalkhoni engundoqo.Igumbi ngalinye linekhitshi. Kumphezulu wamanzi oneembono ezintle zolwandle. enegumbi eliphumela elwandle Yenza umbono omhle wolwandle Kwaye unokuyonwabela isandi samaza amaza aphezulu kunye ne-low tide, enika igumbi ukuziva livulekile kunye nokukhanya kunye nomoya. Ukongeza, unokuhlala kwiminatha yomoya encanyathiselwe kwi-balcony okanye wenze i-yoga kwindawo ye-terrace. Kwindawo ye-balcony kukho itafile yelaptop kunye nesitulo somsebenzi apho unokusebenza ngokukhululeka. I-intanethi engenazintambo iyafumaneka kuwo onke amagumbi nakwiindawo eziqhelekileyo. Ukuba ujonge okwahlukileyo, amava asekhaya awodwa, iLanta Sabaiday Sea view & Balcony yeyona ndawo yokuhlangana nawe.
Ligumbi elibekwe kwindawo yabahlali baseOld Town. esisisithili sokurhweba sabakhenkethi kulula kwaye kulula ukuthenga Kukho iindawo zokutyela ezikufutshane. Ijim ipaki yoluntu
Yindawo yokuhlala ebekwe eluntwini. kwaye nendawo kwiindawo ezahlukeneyo ezifana iitempile, zamaSilamsi, kwiindawo zorhwebo, zokutyela. Ukongezelela, iindwendwe nabo bazi kwaye uzive indlela yobomi babantu kulo ekuhlaleni, ezifana yokuloba, leyo ukuvumela iindwendwe, ukuba badle sona. Always ezintsha kwindawo zokutyela ezikufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Suraida
Sikwindawo yokuhlala kwaye siyakuvuyela ukubakho kwiindwendwe zethu kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba unendawo yokuhlala eyonwabisayo.
Siza kuqhagamshelana nawe ngalo lonke ixesha ungena kwaye sinikezele ngolwazi malunga neendawo zokuhlala ezijikeleze ummandla kunye nesiqithi.
Emva kokungena kwakho siyafumaneka kwi-intanethi. Ke ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo uze uhlele izinto ezifana irente ngesithuthuthu, uhambo, iziqithi bhasi iziqithi ezifana 4, Koh Rok, Koh Rok-Koh Ha kunye Koh Phi Phi ngu Ruang Long Umsila kunye Speedo. Scuba diving Uthutho lokuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya Ulwazi oluninzi malunga neenkonzo Ukuba kukho nantoni na oyifunayo nceda usazise, singakwazi ukukunceda!
Iindwendwe zinokubuza nayiphi na imibuzo evela kuthi, sihlala sikulungele ukunika iingcebiso kunye nokunceda iindwendwe.
Siza kuqhagamshelana nawe ngalo lonke ixe…
Iilwimi: English, Bahasa Indonesia, Melayu, ภาษาไทย
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh Lanta Old Town